यो नि: शुल्क सार्वजनिक यातायात हुन कसरी सम्भव छ? - एस्टोनिया - तल्लीन - 1aviagem.com
अघिल्लो पोष्ट: गेबोरोनमा के गर्ने - बोत्सवाना
अर्को पोस्ट: हामीले मेक्सिकोको एउटी महिलालाई अन्तर्वार्ता लियौं र मेक्सिकोमा कोरोनाभाइरस सिफारिसहरू र सुझावहरू ल्यायौं
पोष्ट गरिएको 14 फेब्रुअरी 2020 द्वारा रोमोमो लुकाना
इस्टोनियाको राजधानी ताल्लिनको पहिलो यात्रामा हामी अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्टमा आइपुगेपछि एउटा असामान्य एयरपोर्टबाट छक्क प .्यौं। वास्तवमा यो जस्तो देखिन्थ्यो यो यो हो कि यसलाई सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा रमाइलो एयरपोर्टहरू मध्ये एक हुन डिजाइन गरिएको थियो। म स्वीकार गर्दछु कि मेरो यात्राको क्रममा केही एयरपोर्टहरू मानिसहरूका लागि डिजाइन गरिएको देखिन्छ। जहाँ एक सामाजिक क्षेत्र छ कि मानिस बीच कुराकानी अनुमति दिन्छ। र यसले तपाईंलाई भीड रोक्न र स्थानको संरचनाको आनन्द लिन प्रोत्साहित गर्दछ। त्यसोभए म मानिसहरूलाई बधाई दिँदै ती मानिसहरुमा जसले एस्टोनियाको ताल्लिन एयरपोर्ट हुनको लागि एउटा उत्तम एयरपोर्ट डिजाइन र निर्माण गरे। Tallinna Lennujaam (TLL)
र किन एयरपोर्ट यति सुन्दर छ?
किनकि एयरपोर्टमा तपाईंसँग आराम गर्ने ठाउँ छ। (ठीक छ, हरेक विमानस्थलको कुर्सी वा अर्को छ)। तर यसमा हामी चीजहरू पनि राख्दछौं।
- एक पियानो जो पारित छन् र खेल्न चाहन्छन् को लागी।
- भर्चुअल वास्तविकता अनुभव गर्न ठाउँ। जहाँ तपाईं एस्टोनियाबाट केहि चीजहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू यहाँ सम्म कि "यो एस्टोनियालीको लागि सामान्य चीज हो" र्याली जस्तै, वा घोडामा चढेर पहाड चढ्ने भनेर पनि उनीहरू भन्छन्। धेरै राम्रो गरी सकेको छ।
र्‍याकेट र राम्रो बलहरूको साथ एक ping pong तालिका।
र अन्तमा, यी सबै बाहेक त्यहाँ एक पोस्टर पनि छ जसले तपाईंलाई एस्टोनियाई नागरिक बन्न आमन्त्रित गर्दछ। र यदि तपाइँ अ know्ग्रेजी जान्नुहुन्छ भने तिनीहरू प्रक्रिया सकेसम्म सजिलो बनाउनको लागि वचन दिन्छन्।
जे होस् मलाई ब्राजिलियन हुन मन पर्थ्यो, तर मलाई इस्टोनियाको नागरिक बन्न लोभ्याईएको थियो। र यो केवल एयरपोर्टमा स्वागतका कारण हो।
ठिक छ, अब के वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हेरौं। र टल्निनमा सार्वजनिक यातायात कस्तो छ?
जब हामी एयरपोर्टबाट निस्क्यौं र ट्राममा प्रवेश गर्यौं (बिजुलीबाट चल्ने एक प्रकारको ट्रेन) हामी टिकट किन्नको लागि स्थान खोज्दै थियौं। दुर्भाग्यवस, सूचना चिन्ह मात्र एस्टोनियामा थियो, र सेल फोनसँग कुनै संकेत छैन। त्यसोभए मैले सोचें: हुन सक्छ हामी ट्रेनमा पैसा दिन्छौं।
तर त्यसबेला जब एक केटाले हामीसँग सम्पर्क गरे र यातायात नि: शुल्क छ भन्न थाले, उनले आफैंले आफ्नो नागरिकको कार्ड प्राप्त गर्नु अघि सार्वजनिक यातायात नि: शुल्क प्रयोग गरेका थिए र सबै ठीक थियो। यदि हामी केहि परिवर्तनहरू बचत गर्न चाहान्छौं भने हामी यसलाई नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्दछौं।
अवश्य पनि, मैले यो कथा शंका गर्‍यो। र ऊ कसरी टिकटको लागि भुक्तान गर्‍यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन उनी कटिबद्ध थिए। यसैले म ड्राइभरमा गएँ र सोधें कि यो कति थियो।
उसले मलाई हेर्यो कि उसलाई के थाहा छ मैले के कुरा गरिरहेको छु। त्यसपछि मैले इस्टोनियामा लेखिएको एउटा पोस्टरमा इशारा गरें जुन मूल्य छ। २ यूरो। उसले मलाई कति टिकट सोधे र मैले २ संकेत दिए।
उसले मलाई दुई टिकट दियो र म ड्राइभले कसरी मूल्य थाहा हुन सकेन र पैसाको बारेमा के थाहा हुन सकेन भनेर म थोरै छक्क परें।
र त्यसपछि मैले सोच्न शुरू गरें ... एयरपोर्टमा, उनीहरूले हामीलाई यति राम्रो स्वागत गर्छन् कि हामी घरमा भएको जस्तो लाग्छ। केटाले भने कि यो टिकट तिर्न जरुरी छैन ... चालकले पैसा के गर्ने केहि निश्चित ज्ञानको अभाव देखायो। के यो सत्य थियो?
के रेल, बस टिकट निःशुल्क हुन्छ?
र वास्तवमा यो कुरा साँचो हो केटोले भने! सार्वजनिक यातायात नि: शुल्क हो, हो।
तर, केवल ताल्लिनका नागरिकहरूका लागि। त्यसैले कुनै पनि पर्यटक र मैले सार्वजनिक यातायात भाडा तिर्नु पर्छ। राजधानी, टाल्निन बाहिर अन्य इस्टोनियाई नागरिकहरू जस्तै। तर प्रायः ताल्लिनका नागरिकहरू सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्। सामान्यतया पर्यटकहरू ट्याक्सीहरू, होटल पिक-अप सेवाहरू वा उबरको विकल्प लिन्छन्। म टिकट किन्न गएपछि ड्राइभर यति छक्क परेको थियो। ऊ भर्खरै यसको बानी भएन!
यो उल्लेखनीय छ कि पर्यटकहरूले आफ्नो टिकट किन्नुपर्दछ र यात्राको लागि तिर्नु पर्छ। मूल्यहरू परिवर्तनशील छन्, र यदि तपाईं टिकट बिना नै समातिनुभयो जसको मूल्य १ देखि २ यूरो छ। तपाईलाई e० यूरो सम्म जरिवाना लाग्न सक्छ। टिकट सामान्यतया प्रति घण्टा लायक हुन्छ। तर यो अधिक टिकटको लागि टिकट किन्न सम्भव छ। थप जानकारीको लागि तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्:
नि: शुल्क सार्वजनिक यातायात शहरको लागि राजस्व कसरी कमाउन सक्छ?
ठूलो प्रश्न यो हो: र कसरी तिनीहरूले यो सम्भव बनाए?
सामाजिक समावेशीकरणको एक उपायमा कुनै पनि नागरिकलाई नि: शुल्क सार्वजनिक यातायातको उपयोग गर्न अनुमति दिन विशेष गरी जो जागिर खोजिरहेका थिए र जो अधिक कमजोर आर्थिक स्थितिमा थिए उनीहरूलाई यो स्वतन्त्र यातायात उपाय एस्टोनियाली राजधानीमा अपनाइएको थियो। शहरले सार्वजनिक नीति प्रयोगशालाको रूपमा सेवा गर्‍यो। अचम्मको कुरा, यात्रुहरूले टिकट नतिरीएको भए पनि सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग बढेकोले तल्लिनको राजस्वमा २० करोडले वृद्धि भएको थियो।
त्यहाँ कुनै खाजा खाजा छैन
म स्वीकार गर्दछु कि यो खोजेर म खुशी थिए। तर त्यसो भए यो सार्वजनिक यातायात आफैं कसरी टिक्छ? यो कसरी सम्भव छ, किनकि मुख्य वित्तीय योगदान प्रयोगकर्ताहरूबाट आउँदछ?
उत्तर यो सार्वजनिक नीति बनाइएको तरीकामा छ। एस्टोनियाको राज्य सरकारले सिटी हलमा (स्थानीय सरकार) सार्वजनिक नीतिहरूको लागि बजेट ट्रान्सफर गर्दछ। यो स्थानान्तरण नगरपालिका द्वारा बासिन्दाहरूको गणना गरेर गरिएको हो।
ताल्लिनको सन्दर्भमा त्यहाँ एउटा घटना घट्यो जहाँ एस्टोनियावासीहरू त्यहाँको नागरिकता पाउन ताल्लिन आएका थिए। त्यहाँ ठेगानाहरूको एक विशाल परिवर्तन थियो, एक अविरल प्रवासन आन्दोलन। यो स्वतन्त्र यातायात नीति अपनाउनु अघि यातायात क्षेत्र भन्दा बढी २० मिलियन यूरो राजस्व उत्पन्न भयो। तथ्य यो हो कि सबै नागरिकहरूले करहरू तिर्छन्, तर सबैले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दैनन्। राजधानीमा जनसंख्या बृद्धि भएकोले र नगरपालिकाले बासिन्दा प्रति क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्ने हुँदा करहरूले यस परियोजनालाई वित्तीय सहयोग पुर्‍यायो। पाठ्यक्रम को साथै ती दर्शकहरु जो आफ्नो टिकट को लागी भुक्तान गर्छन्।
र किन यो परियोजना सिर्जना गरिएको थियो?
पहिले नै उल्लेख गरिएको पहिलो कारण बाहेक, जुन सामाजिक समावेशीकरणको लागि थियो र सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क ताल्लिनमा निःशुल्क यात्रा गर्न अनुमति दिनको लागि, त्यहाँ अन्य उपायहरू पनि यो उपायका कारणहरू थिए।
निजी कारहरूको प्रयोगमा%% कमी।
यातायात बढी सामञ्जस्यपूर्ण भयो। पैदल यात्री क्रसिंगको सम्बन्धमा ड्राइभरहरू अधिक बिरामीहरूको साथ।
दुर्घटनाहरू घटाउने, र कार्बन मोनोअक्साइडद्वारा वायु प्रदूषण घटाउने।
यस नीतिको लागि ताल्लिनको जनसंख्याको% ०% स्वीकृति।
यो याद राख्नु उचित छ कि टाल्निन अझै धेरै पर्यटन शहर होइन, त्यसैले यातायात प्रणाली आफ्नै नै रहन्छ। र टिकटको लागि तिर्ने पर्यटकहरूको कारणले होईन। र यो अनुभव हो जुन केही व्यक्तिले अनुभव गरेका छन् कि नागरिकहरूले त्यस्तो स्थानमा सार्वजनिक व्यवहार गर्दछन् जुन उनीहरूका लागि स्वतन्त्र छ।
कसलाई थाहा छ, हुनसक्छ तपाईं आफ्नो स्क्रिप्टमा एस्टोनिया राख्न उत्साहित हुनुहुन्छ? म ग्यारेन्टी दिन्छ कि त्यहाँ राम्रो आइसक्रीम भन्दा धेरै छ।
त्यहाँ रातो बटनमा हामीलाई पछ्याउन नबिर्सनुहोस्!
त्यसैले हामी तपाईं लाई यो नि: शुल्क सामग्री ल्याउन जारी।
म यहाँ छु र अर्को समय सम्म।
इतिहास विमानस्थल इस्टोनिया free तेलिन ढुवानी